Nhau - TBIT inobatsira TMALL e-bhasikoro kuti riite zvirinani mubhizimusi rekufambisa bhizinesi
2020, igore rakagwinya kune ese maviri-mavhiri e-bhasikoro indasitiri. Kutanga kwe COVID-19 kwakonzera kuwedzera mukutengesa e-bhasikoro maviri-mavhiri mupasi rose.Pane mazana emamirioni mazana matatu emamiriyoni e-mabhasikoro muChina, uye avhareji yekukwira nguva yemunhu mumwe nemumwe ingangoita awa rimwe pazuva. Haisi chete chishandiso chekufambisa, asi zvakare chiitiko chekudyidzana chevanhu vazhinji vanoyerera vachipinda uye mazana emamiriyoni erwendo. Simba guru mumusika wevatengi rakachinja zvishoma nezvishoma kubva kune vakazvarwa muma 70s uye 80s kune avo vakaberekerwa mu 90s uye 00s. Chizvarwa chitsva chemapoka evatengi hachina kugutsikana nezviri nyore kutakura zvinodiwa zvee-mabhasikoro. Ivo vari kutsvaga mamwe akangwara, ari nyore uye mabasa ehunyanzvi.
E-bhasikoro inogona kuve yakangwara chinouraya. Kuburikidza nedata dhata, tinogona kunyatsoona mamiriro ehutano ee-bhasikoro, iyo yakasara bhatiri, kuronga nzira yekutasva, uye kurekodha zvido zvemuridzi.Kunyangwe mune ramangwana, akateedzana mashandiro akadai sekuraira kwezwi uye kubhadhara kunogona kupedzwa kuburikidza ne e-bhasikoro. Nedata hombe rakanangana nehungwaru hwekunyepedzera uye gore komputa, mune itsva wave yeruzivo tekinoroji shanduko, kubatana kwezvinhu zvese kwave Kana e-mabhasikoro achishandira pamwe nehungwaru hwekugadzira uye neInternet yezvinhu, smart smart Kurongeka kwezvakatipoteredza kuchaunza.
Yakabatana nekatalisisi yeiyo yekugovana hupfumi uye maitiro eiyo lithium-ionization, pamwe nezvakanaka mhedzisiro yekuzadzikiswa kweiyo nyowani yenyika mwero kwegore rimwe, mairi-mavhiri e-bhizimusi indasitiri akaunza asina kumboitika mikana yekuvandudza. Nekudaro, semamwe maindasitiri echinyakare, kuputika kwekudiwa kwemaviri-mavhiri e-mabhasikoro kwakwezvawo kutarisa kwekambani dzeInternet. Pasi pechirambidzo che "mugwagwa wekutyaira" we smart magetsi unicycle uye e-scooter, tarisiro yehunyanzvi yakachinjirwa kumusika we e-bhasikoro.
Kutaura kuti shanduko huru mu e-bhizimusi indasitiri mumakore maviri apfuura kuita kweiyo nyowani yenyika muyero wema e-mabhasikoro. Mushure mekumisikidzwa kweiyo nyowani yenyika mureza, nyika standard e-mabhasikoro anozove akakosha emusika. Izvi zvinounza mikana mikuru mitatu kumusika we e-bhasikoro: shandisa yenyika yakajairwa e-mabhasikoro, kuchinja lead-acid mabhatiri kune lithiamu mabhatiri, uye neInternet. Iyi mitatu mikuru mikana yakapinda mune yese e-bhizimusi indasitiri. Muchokwadi, maInternet giants ari kutarisa kune maviri-mavhiri e-bhizinesi bhizinesi, kwete chete kukoshesa iyo hombe purofiti nzvimbo yemaviri-mavhiri e-bhizimusi indasitiri iri pasi peiyo surge mukuda, asi sarudzo isingadzivisike mukuvandudzika kwenguva.
Musi waKurume 26, 2021, iyo TMALL E-bhasikoro Smart Mobility Musangano uye maViri-mavhiri maindasitiri Ekudyara Investment yakaitirwa muTianjin. Musangano uyu wakavakirwa padanho nyowani yehungwaru hwekunyepedzera uye iyo IOT, kuunza smart smart ecological kufamba kwesainzi uye tekinoroji mabiko.
Musangano wenhau weTMALL wakaratidza wese munhu mashandiro ekudzora e-bhasikoro neBluetooth / mini chirongwa / APP kudzora iyo e-bhasikoro, yakasarudzika izwi kutepfenyura, Bluetooth kiyi yedhijitari, nezvimwewo izvi zvakare zvina zvakakosha zve TMALL e-bhasikoro smart yekufamba mhinduro . Vashandisi vanogona kushandisa nharembozha. Ita akateedzana ehungwaru mashandiro senge switch switch yekudzora uye kurira kwezwi kwee-mabhasikoro. Kwete izvozvo chete, asi iwe unogona zvakare kudzora e-bhasikoro mwenje uye zvigaro zvigaro.
Kuzadzikiswa kwemabasa epamoyo anoita kuti iyo e-bhasikoro ichinjike uye nehungwaru kunoonekwa neiyo TBIT chigadzirwa WA-290 icho chinowirirana neTMALL.TBIT yakanyatso kurima munda wee-mabhasikoro uye ndokugadzira smart e-bhasikoro, e-bhasikoro kubhadharisa, kugovana e-bhasikoro uye mamwe mafuratifomu manejimendi ekufambisa. Kuburikidza nehungwaru nharembozha yeInternet tekinoroji uye smart IOT, ziva chaiyo manejimendi manejimendi e-mabhasikoro, uye unosangana nemhando dzakasiyana dzekushandisa pamusika.
Kusvika ikozvino, smart TBIT chikuva uye smart IOT chishandiso chakapa smart smart services kune vanopfuura mamirioni zana vashandisi pasi rese. Yake smart platform ine vanopfuura mazana maviri vekumba nevatorwa vanobatirana navo, uye ayo terminal masheni anopfuura mamirioni mashanu. Iwo akachenjera e-mabhasikoro ave maitiro akajairika. Vanhu, e-mabhasikoro, zvitoro, uye mafekitori akavakirwa mune smart ecological yakavharwa chiuno. Kuburikidza nedhata-based oparesheni uye masevhisi, mabrand anokwanisa kunzwisisa vashandisi zvirinani, zvigadzirwa zvinowirirana, masevhisi ari nyore, uye ruzivo rwevashandisi rwuri nani. Izvi zvinogadzirisa dambudziko revanhu uye e-mabhasikoro munguva yechinyakare. Dhata kukanganisa mukati, mashopu uye mafekitori.